Downloads 42 010
Nohavaozina taminy 12 / 15 / 2018: Modely sy modely vita amin'ny virtoaly tanteraka, ary mampiova tetika sivy avo lenta, manampy ny dikan-teny manokana natokana ho an'ny Prepar3D ka hatramin'ny 4 + version. New custom gauges. Modely tanteraka amin'ny zava-misy. Elatra misy elatra: avy amin'ny VC, tsy maintsy tsindrio ny "Wing Lock".
Ity fiaramanidina ity dia FSX SP2 / Acc / Steam ary P3D v1 v2 v3 v4 + ihany. Misy rakotra virtoaly (VC) misy azy io toy ny fiara misy fiasa teratany ho azy io.
Anisan'izany elatra sy firaiketam-pirahalahiana ... Ny fitaovana ampiasaina ho an'ny ampahany betsaka amin'ny fampiasana sary vetaveta. Fanampin'ny hatsarana be voninahitra! Ny modely sy ny 3d VC dia akaiky kokoa ny zava-misy.
Alao sary an-tsaina ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina manokana anao, toy ny mahazatra anao amin'ny fiaranao, tsy nofy fotsiny ve izany? Ho an'ireo mpamorona ny Aircraft A5 dia tanteraka io nofy io. Ny A5 dia fiaramanidina ara-panatanjahan-tena roa miaraka amin'ny kodiarana matevina. Ny alikaola dia afaka mivoatra sy mivoatra eo amin'ny tany ary koa amin'ny rano, renirano, renirano ary farihy. Ny Aircraft A5 dia afaka manohana hatramin'ny 195 kg ary ny haavo farany dia 193km / h. Ny lanjany (650 kg) ary azo ampiharina, mora foana ny mandefa ny elany roa satria mihodina tranofiara sy garazy ny milina. Ny Aircraft A5 dia manana paraky mora mora azo mora foana raha sendra misy loza.
Icon Aircraft 5 nahazo ny loka ambony indrindra ny 2010 Dot Red Design Award. Ny asa tanana amin'izao fotoana izao ao amin'ny 103 vinavinaina 000 €, ny vidin'ny iray sedan mihaja.
Beechcraft D18S amphibie FSX & P3D
Nardi naoty-333 Riviera Bible 1.0 (Rehefa Jerena FS2004)